Ukubizelwa Esenzweni: Iyini i-CTA? Ungakuthuthukisa Kanjani Ukuphumelela Kwazo?
Shayela Esenzweni: Iyini i-CTA? Khulisa i-CTR yakho!
NgeSonto, Agasti 7, 2016 NgoLwesihlanu, Agasti 12, 2016 Douglas Karr
Kubonakala kusobala impela uma ubuza umbuzo, Yini Ikholi Yokwenza noma i-CTA, kepha imvamisa kuyithuba elilahlekile noma ithuba elihlukumezekile lokushayela abafundi, abalaleli, nabalandeli ngokujulile ekuzibandakanyeni nomkhiqizo wakho.
Kuyini Ukubizelwa Esenzweni?
Ukubizelwa esenzweni kufana nesifunda sesikrini esishayela umfundi ukuthi achofoze ukuze ahlanganyele ngomsindo ngomkhiqizo. Kwesinye isikhathi kuba isithombe, kwesinye isikhathi kube inkinobho nje, kwesinye isikhathi kube yisigaba esigodliwe sefa ledijithali. Akuzona nje izingosi ezingaba nekholi esenzweni, cishe zonke izinhlobo zokuqukethwe zingakwazi (futhi iningi kufanele).
Enkulumweni yami yokugcina engayethula emcimbini wokuxhumana nabantu bendawo, ngathembisa abantu ukuthi babhalisele incwadi yethu yamahhala ngokuthumela imiyalezo marketing Ku-71813 - an ukubizelwa esenzweni ngempumelelo ngoba isihloko besisebenza futhi wonke umuntu ubenamaselula wakhe awasebenzisayo ngesikhathi senkulumo. Sibone impendulo engcono kulokhu kunokucela abantu ukuthi baye kusayithi babhalise.
Ama-webinar angaba (futhi kufanele) abe nocingo lokuthatha isenzo, ama-infographics kufanele abe nokusebenza ngempumelelo shayela esenzweni (Okuhlekisayo kunikezwe isibonelo esingezansi esilahle ithuba lombhali!), kanye nezethulo kufanele. Umuntu engisebenza naye wayehlale enikela ngesipho samahhala ngokushintshanisa amakhadi ebhizinisi ekupheleni kwezethulo zakhe - wasebenza ngendlela emangalisayo. Ukuphusha othile ukulanda, ukubhalisa, ucingo, noma enye i-athikili efanele kungaba ama-CTA amahle.
Ingabe Yonke Into Kufanele Ibe Nocingo Lokwenza?
Ngeke uthole izingcezu eziningi kakhulu zokuqukethwe esikukhiqizayo ezingenayo ikholi yokwenza okuthile, kodwa sabelana ngokuqukethwe okuyitoni ngaphandle kwakho. Akuyona yonke into oyenzayo okufanele ngabe uzama ukuyithengisa, okunye kwakho kufanele kube kuzama ukwakha ukuthembana negunya elinomholi namakhasimende. Hlala uthengisa kungaba yimantra kumasu amaningi wokuthengisa nokumaketha, kepha ukuthengisa nakho kungaba yinzuzo kwezinye izingxoxo. Umthetho wami wesithupha uthi hlala une-Call To Action lapho inhloso yakho ukugqugquzela lowo muntu ekubandakanyeni okujulile.
Ungazakha Kanjani Izingcingo Ezisebenzayo
Kunezindlela ezifakazelwe zokuhambisa izingcingo ezisebenzayo kumasu wezenzo. Nazi ezinye zazo:
Gcina izingcingo zakho ezenzweni zibonakala kakhulu - Ukubekwa kwama-CTA kufanele kube seduze noma kuhambisane nokugxila komfundi. Sivame ukubeka ama-CTA ngakwesokudla kokuqukethwe esikubhalayo ukuze ukunyakaza kwamehlo kwemvelo kwababukeli bakuthathe. Singabenza sibacindezele kakhudlwana ekusakazweni kokuqukethwe ukuze sikuthathe inothi ngokuzayo. Amanye amasayithi antanta i-CTA ukuze kuthi lapho umfundi eskrola, i-CTA ihlale kubo.
Gcina izingcingo zakho ezenzweni zilula - Noma ngabe isithombe noma okunikezwayo enkulumweni yakho, ukuqinisekisa ukuthi imiyalo ilula, futhi indlela eya ekuzibandakanyeni kulula kuzoqinisekisa ukuthi inani eliphakeme lezithameli zakho lizoshaya, noma uchofoze ngesenzo obacela ukuba basenze. I-CTA esekwe esithombeni ngokuvamile ine-
Gcina isenzo sicacile ku-CTA yakho. Sebenzisa amagama wesenzo njengokushaya ucingo, ukulanda, ukuchofoza, ukubhalisa, ukuqala, njll. Kufanele kusetshenziswe. Uma kuyi-CTA esuselwa esithombeni, uzoyithola kunkinobho eqhathaniswe kakhulu. Abasebenzisi beWebhu bafundisiwe ukuchofoza izinkinobho, ngakho-ke isithombe sizibhalisa ngokuzenzakalela njengomsebenzi okufanele bawuthathe.
Faka umuzwa wokuphuthuma - Isikhathi siphelile? Ngabe umnikelo uphelelwa yisikhathi? Ingabe kukhona inani elilinganiselwe lezihlalo? Noma yini ezosiza ekuncengeni umfundi ukuthi athathe isinyathelo manje esikhundleni sakamuva izokhuphula izinga lokuguqulwa kwakho. Ukungeza umuzwa wokuphuthuma kuyisici esibucayi sayo yonke i-CTA.
Push Izinzuzo phezu Izici - Izinkampani eziningi kakhulu ziyaziqhenya ngalokho ezikwenzayo esikhundleni sezinzuzo ezizitholela amakhasimende azo. Akukona okwenzayo okuthengisayo; kuyinzuzo eheha ikhasimende ukuthi liyithenge. Ngabe unikeza ithuba lokwenza izinto zibe lula? Ukuthola imiphumela esheshayo? Ukuthola izeluleko zamahhala?
Hlela indlela eya ekuguqulweni - Ngokuthunyelwe kubhulogi, indlela ivame ukufundwa, bheka i-CTA, ubhalise ekhasini lokufika, bese uguqula. Indlela yakho eya ekuguqulweni ingahluka kodwa ukubona ngeso lengqondo nokuhlela indlela ofisa abantu ukuthi bayithathe ngokuqukethwe kwakho kuzokusiza ukuklama kangcono futhi uguqule okuningi ngecebo lakho leCall To Action.
Hlola ama-CTA akho - Design izinhlobo eziningi zama-CTA akho ukukhomba ukuthi iyiphi eshayela imiphumela engcono yebhizinisi. Okumane nje akwanele - izinkampani eziningi kakhulu azithathi isikhathi sokunikezela ngemiklamo ehlukile, i-verbiage, imibala nosayizi. Kwesinye isikhathi umusho olula uphelele, kwesinye isikhathi kungaba i-animated gif.
Hlola Izipesheli zakho - Isivivinyo samahhala, ukuthunyelwa kwamahhala, isiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100%, isaphulelo… kufanele uzame ukukhethwa kokunikezwa okuhlukile ukuheha ukwanda kokuguqulwa. Qiniseka ukukala ukusebenza okuphelele kwalokhu okunikezwayo maqondana nokugcinwa kwamakhasimende, futhi, noma kunjalo! Izinkampani eziningi zinikela ngesaphulelo esisezingeni eliphezulu ngaphambili kuphela ukulahlekelwa yikhasimende ekupheleni kwenkontileka yabo.
Bheka enye i-infographic esabelana ngayo ngokuningi Okufanele ukwenze nokungafanele ukwenze kokubizelwa ezenzweni okusebenzayo.
Tags: gif animatedshayela esenzwenishayela kumbala wesenzoshayela endaweni yesenzobizela kumumo wesenzoshayela kusayizi wesenzoshayela esenzweni i-verbiagebiza amagama ezenzoctaIzinkinobho ze-CTActa indawoisimo se-ctausayizi we-ctaamagama e-cta
May 5, 2015 ku-9: 08 AM
Siyabonga ngokwabelana ngamathiphu omkhankaso we-CTA osebenzayo. Ukukhethwa kwangempela kokuhlelwa nombala wekhasi kubaluleke kakhulu ngomphumela ongcono. Ngikwazile ukukhankasa amaningana futhi kuyasebenza impela.
Lo mkhankaso we-ebook wokukhuthaza umkhankaso we-imeyili unekholi enhle kakhulu yokusebenza. Esikhundleni se- "Ngifuna lokhu" noma "landa manje!" Ithumbe izithameli ngezimangaliso zayo “HAMBA isikhathi eside!”Inkinobho yombhalo we-CTA.
Ngiyithandile ngoba ihambisana nokuqukethwe yi-ebook (Sebenzisa ukunyakaza kwamanani okuhambisanayo kumasheya aphesheya kanye nase-US ADRs ukubikezela amanani entengo ngokunembile ngaphambi kokuvulwa kwezimakethe.) Kanye nezithameli zayo, okuyibo abadayisi nabathandi bezimakethe zamasheya. Ithole lapha.